BUDDHIST TERMS' Dictionary: SYNOD - သင်္ဂီတိ၊ သံဂါယနာ
SYNOD - သင်္ဂီတိ၊ သံဂါယနာ
သင်္ဂီတိ (Sangiti) - သံဂါယနာ၊ သံဃာ့အစည်းအဝေးကြီး၊ သံဂါယနာတင်ပွဲ။
(၁) ၄၅-၀ါပတ်လုံး ဘုရားရှင်ဟောကြားတော်မူခဲ့သော တရားတော်များကို အရှင်မဟာကဿပ ဦးဆောင်သော ရဟန္တာမထေရ် ၅၀၀-တို့သည် ဘုရားရှင် ပရိနိဗ္ဗာန်ဝင်စံပြီး သုံးလနှင့် လေးရက်အကြာတွင် ရာဇဂြိုလ်မြို့၌ စနစ်တကျ စုစည်းအတည်ပြုခဲ့ကြသည်။
(၂) သာသနာနှစ် (၁၀၀)တွင် ဝေသာလီမြို့၌ အရှင်ယသထေရ်ဦးဆောင်သော ရဟန္တာမထေရ် (၇၀၀)တို့သည် အဓမ္မ၀တ္ထု (၁၀)ပါးကို သုတ်သင်ရှင်းလင်းကာ ဒုတိယသံဂါယနာ တင်ခဲ့ကြသည်။
(၃) သာသနာနှစ် (၂၃၅)တွင် ပါဋလိပုတ်မြို့၌ အရှင်မဟာမောဂ္ဂလိပုတ္တတိဿ ဦးဆောင်သော ရဟန္တာမထေရ် အပါး (၁၀၀၀)တို့သည် အဓမ္မ၀ါဒများကို စိစစ်သုတ်သင်၍ တတိယသံဂါယနာ တင်ခဲ့ကြသည်။
(၄) သာသနာနှစ် (၄၅၀)တွင် သီဟိုဠ်ကျွန်း မလယဇနပုဒ်၌ အရှင်မဟာဓမ္မရက္ခိတ ဦးဆောင်သော မထေရ် (၅၀၀)တို့သည် ပေထက်အက္ခရာတင်ကာ စတုတ္ထသံဂါယနာ တင်ခဲ့ကြသည်။
(၅) သာသနာနှစ် (၂၄၁၅)တွင် မြန်မာနိုင်ငံ မန္တလေးမြို့၌ အရှင်ဇာဂရာဘိဝံသ ဦးဆောင်သော မထေရ် (၂၄၀၀)တို့သည် ကျောက်ထက်အက္ခရာတင်ကာ ပဉ္စမသံဂါယနာတင်ခဲ့ကြသည်။
(၆) သာသနာနှစ် (၂၄၉၈)တွင် မြန်မာနိုင်ငံ ရန်ကုန်မြို့၌ အရှင်ရေ၀တ ဦးဆောင်သော မထေရ် (၂၅၀၀)တို့သည် ပုံနှိပ်စာအုပ် မူသန့်များဖြစ်အောင် သုတ်သင်တည်းဖြတ်၍ ဆဋ္ဌသံဂါယနာ တင်ခဲ့ကြသည်။
Great Council: Great Rehearsal
(1) The whole body of the teachings of the Buddha were recited and given authenticity by an assembly of five hundred arahats presided over by the Venerable Mahakassapa, convened at the city of Rᾱjagaha (India), just three months and four days after Lord Buddha passed away.
(2) In the year 100 of the Buddhist Era, the Second Great Council was held in the city of Vesali (India) where seven hundred arahats led by the Venerable Yasa dismissed the ten indulgences thatasect of heretical monks were trying to add to the original teachings.
(3) In the year 235 of the Buddhist Era, the Third Great Council was held in Pataliputta City (India) where one thousand arahats headed by the Venerable Mahᾱmoggaliputtatissa cleared the Doctrines of unlawful extraneous elements that some had tried to insinuate into it.
(4) In the year 450 of the Buddhist Era, the Fourth Great Council was held in the market town of Malaya in what is now Sri Laṅka where five hundred venerable elders led by the Venerable Mahᾱdhammarakkhita inscribed the entire words of the Buddha’s teachings on palm leaves.
(5) In the year 2415 of the Buddhist Era, the Fifth Great Council was held in the city of Mandalay, Myanmar, where two thousand and four hundred venerable elders led by the Venerable Jagarabhivaṁsa convened to recite and approve the scriptures which were then inscribed on stone slabs.
(6) In the year 2498 of the Buddhist Era, the Sixth Great Council was held in the Mahᾱpᾱsᾱna Great Cave, Yangon, Myanmar, where two thousand and five hundred venerable elders led by the Venerable REvata convened to recite and verity the scriptures which were later put into print.